Akwụkwọ nlele | Radị Rave
Nke a bụ otu ihe atụ na peeji nke. Ọ bụ dị iche iche si a blog post n'ihi na ọ ga-anọ otu ebe ga-egosi n'elu gị na saịtị igodo (ọtụtụ gburugburu). Ọtụtụ ndị mmadụ na-amalite na-About page ahu na-ewebata ha ka ha nwere na saịtị ọbịa. Ọ nwere ike kwuo ihe dị ka nke a:
Ndewo ebe ahụ! Na na na a igwe kwụ otu ebe ozi site na ụbọchị, aspiring omee n'abalị, nke a bu m website. M na-ebi Los Angeles, nwere nnukwu nkịta aha Jack, na-amasị m Pina coladas. (Ma gettin 'na-ejide na na mmiri.)
... Ma ọ bụ ihe dị ka:
The XYZ Doohickey Company e tọrọ ntọala na 1971, na anọwo na-enye àgwà doohickeys ka ọha na eze kemgbe. Emi odude ke Gotham City, XYZ mîdaha n'elu 2,000 ndị na-eme ụdị nile nke di egwu ihe Gotham obodo.
Dị ka a ọhụrụ WordPress o, ị kwesịrị ị na-aga gị dashboard ka ihichapụ a na peeji nke na ike ọhụrụ peeji nke gị n'ime. Nwee anụrị!